Ayax raxan-raxan u socda oo ragaadiyey daaqi miyiga Laas-qoray iyo dur-duri ee Sanaag (Dhegeyso) – Radio Daljir
Ayax raxan-raxan u socda oo ragaadiyey daaqi miyiga Laas-qoray iyo dur-duri ee Sanaag (Dhegeyso)
Diseembar 1, 2013 5:33 b 0
Laas-qoray,? December 1, 2013 – Miyiga degmada laas-qoray iyo deegaanka dur-duri ee gobolka Sanaag, waxaa fara kulul ku haya cayayaanka loo yaqaan Ayaxa, xili roobabkii dayrta ay si wanaagsan ugu horeen deegaankaas bishii ina dhaaftay.
Cayayaankan Ayaxa oo raxan raxan u socda isla markaasna aad u tiro badan, waxaa uu beegsanayaa dhirta deegaanka iyo guud ahaan daaqii oo idil, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Maxamuud Ismaaciil Ciyoon.
Xeebta degmada Laas-qoray ee gobolka Sanaag ayaa ugu daran meelaha uu cayayaanka Ayaxa dhibaatada ba?an ku hayo, daaqa ayuu cunnayaa isagoo xaaluf ka dhigaya dhirta iyo? cows-ka cagaarka ah.
Maamulka gobolka Sanaag ayaa dowladda Puntland iyo hay?addaha gargaarka ugu baaqay in ay qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa Ayaxu inuu saamayn kale ku yeesho gobolka, isla markaasna ku faafo deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka.
Dhegeyso: Khadra degan oo daljir ka tirsan ayaa waraystay gudoomiyaha Sanaag mudane Ciyoon
Gen. Cadde ?Musharaxiinta ayaa talo ku leh keenista guddiga khilaafaadka ee doorashada? (Dhegeyso)
Malawi oo doonyo dheereeya kaga hortegaysa soomaali si xad-dhaaf ah tahriib ugu gala dalkaas